About Us - Gaofuheng Electric Technology Co., Ltd
epurasitiki yakakomberedzwa uye zvakapoteredza simbi
epurasitiki jekiseni muforoma & vakakanda muforoma
Shenzhen Gaofuheng Electric Technology Co., Ltd. ari Mumwe-kurega pose Electronic Manufacturing Service Provider muna OEM & ODM mhando chokufuka pcb zvokuzvigadzirira simbi dzomuchina, chikamu zvokuvakisa, gungano, zvirongwa, basa bvunzo, purasitiki muforoma jekiseni, kavha uye logistics kubvira 2008.
chigadzirwa ruzivo yedu siyana zvinosanganisira musha mudziyo, mutengi zvemagetsi, maindasitiri kuzvidzora, moto aramu hurongwa, kicheni mudziyo, zvokurapa midziyo, motokari Audio hurongwa, kadambari uye telecommunication, etc.
Tine 8 zvakakwana gungano mitsetse, kusanganisira SMT michina kubva svikiro kukwira kumusoro kumhanya Juki Brands, Tungamirira-isina wavesoldering michina uye reflow michina, otomatiki solder namatidza, aidhinda X-ray inisipekita uye BGA rework chiteshi, ICT testers Chrono midziyo, customized FCT yokuedzwa Fixtures uyewo yedu yokuedzwa yezvirwere zvose zvamarudzi kugadzikana uye rakavimbika nekuongororwa.
Tinotenda muna yepamusoro uye basa, ndiko kunokosha okunze kuhwina kumusika. Tinogara chakatsaurirwa kuna kunatsiridza uye basa kuburikidza ndiwedzere zvivako zvedu uyewo mutengi ruzivo uye dzinovaka. rokutengesa edu chikwata kuri kupenya ne nyanzvi unyanzvi hwokukurukurirana uye anokurumidza Kupindura muvhunzo wako.
Tinoda kusika munhu takunda zvisamumirira pamwe pamwe nemi. Tapota taura nesu nhasi.
The kambani unyanzvi mukubudisa mukuru-mabasa zvokushandisa, simba zvekushandisa simba, simba kukura nezvaanogona, zvakanaka rwokugadzira mabasa.